ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းရေးမှု၀ါဒ | ONODERA LIFE SUPPORT
ONODERA LIFE SUPPORTကုမ္ပဏီလီမိတက် (အောက်ပါလက်ရှိကုမ္ပဏီလီမိတက်) သည် ၀ဘ်ဆိုဒ်အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပေးနေသော၀န်ဆောင်မှု(အောက်ပါလက်ရှိ၀န်ဆောင်မှု)တွင် အသုံးပြုသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါမှု၀ါဒမှုများအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
အပိုဒ် ၁။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဆိုသည်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေတွင်ပါရှိသော ပုဂ္ဂိုရေးအချက်အလက်ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ လက်ရှိတည်ရှိနေသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြစ်ပြီး ထိုအချက်အလက်များဖြစ်သော အမည်၊ မွေးသက္ကရစ်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်နေရာနှင့် အခြားရေးဖြည့်ရမည့် အချက် အလက်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ်ဦးကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက် နှင့်မျက်နှာအသွင်အပြင်သတင်းအချက်အလက်များ၊လက်ဗွေများ၊အသံအချက်အလက်နှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်ပြားပေါ်ရှိအာမခံနံပါတ်စသည်တို့ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။
အပိုဒ် ၂။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ်။
လက်ရှိမူ၀ါဒသည် လက်ရှိကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်နေသော၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင် အသုံးပြုသူ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ကိုက်ညီသော အချက်အလက် များ ကိုကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင် ယခုကုမ္ပဏီက လေးစားလိုက်နာရန်လမ်းစဥ်ဖြစ်သည်။
အပိုဒ် ၃။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြု၏ ရည်ရွယ်ချက်။
လက်ရှိကုမ္ပဏီမှ အသုံးပြုသူသည် ထို၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခါတွင် အမည်၊ မွှေး သက္ကရစ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် များကို စစ်ဆေးခြင်းများရှိပါသည်။
လက်ရှိကုမ္ပဏီမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ရယူအသုံးပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
・လက်ရှိကုမ္ပဏီမှ ထို၀န်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်ရန်၊ စီမံရန်အတွက်။
・ထို၀န်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ရန်၊ ၀န်ဆောင်မှုအသစ်များဖန်တီးရန်နှင့် မေးခွန်းလွှာမေးမြန်းခြင်းနှင့် သတင်းရယူခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်။
・အသုံးပြုသူမှမေးမြန်းလာခြင်းများကိုပြန်လည်ဖြေကြားရန်။ (ကာယကံရှင်ဟုတ်မှန်ကြောင်းတိုက်စစ်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုရန်)
・အသုံးပြုရန်အတွက်လျှောက်သောလျှောက်လွှာများကိုအခြေခံ၍ မိတ်ဖက် လုပ်ငန်း၊အသင်းအဖွဲများသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုထုတ်ပေးရန်အတွက်။
・အသုံးပြုသူမှအသုံးပြုနေစဥ် ထို၀န်ဆောင်မှုရှိ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကို ပေးပို့ရန်အတွက်။
・ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များကို အသိပေးရန်လိုအပ်သော အခါတွင် ဆက်သွယ်ရန်အတွက်။
・တားမြစ်ထားသော အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို စုံစမ်းရန်အတွက် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကိုဆန့်ကျင်သူများ၊ မမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက် များဖြင့်အသုံးပြုရန်လုပ်ဆောင်သော အသုံးပြုသူများကို ငြင်းပယ်ရန်အတွက်။
・အထက်ပါရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စပ်လျဥ်းသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။
အပိုဒ် ၄။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်အရာအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲ ခြင်း။
လက်ရှိကုမ္ပဏီသည် အသုံးပြုသူမှ ထုတ်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ နှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ဥပဒေစံနှုန်းများနှင့်အညီစီမံခန့်ခွဲပါမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များထဲသို့ မမှန်ကန်သော၀င်ရောက်မှု၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ တုပခြင်း၊ ပေါက်ကြားခြင်းများမရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့ပေါ်ပေါက်မှုဖြစ်ပေါ်လာလျှင် လျှင်မြန်စွာမှန်ကန်မှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
အပိုဒ် ၅။ အာမခံခြင်းမရှိကြောင်းရှင်းလင်းချက်။
・	လက်ရှိ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍လက်ရှိ၀န်ဆောင်မှုတွင် တင်ထားသောအချက်အလက်အမျိုးအစားများ(လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ မှန်ကန်မှု၊ ပြည်စုံမှု၊ အကျုံး၀င်မှု၊ သတ်မှတ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်သင့်လျော်မှု)များနှင့်ပတ်သက်၍ အာမမခံပါ။အသုံးပြုသူမှထိုအချက်အလက်အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို လုံး၀တာ၀န်မယူပါ။
・လက်ရှိကုမ္ပဏီသည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် အခြားသူများ ကြားဖြစ်ပေါ်သော အရောင်းအ၀ယ်၊ ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ငြင်းပွါးဖွယ်ရာများနှင့် ပတ်သက် ၍ လုံး၀တာ၀န်မယူပါ။
・လင့်ခ်မှတဆင့်၀င်ရောက်သော ၀ဘ်ဆိုဒ်၏အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိကုမ္ပဏီသည် အသုံးပြုသူမှ အခြားသော၀ဘ်ဆိုဒ်များမှအမျိုးမျိုးသောသတင်း အချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု များကိုလုံး၀ တာ၀န်မယူပါ
・ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာများနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ၊ အသုံးပြုသူ၏ စမတ်ဖုန်း၊ Tablet နှင့် ကွန်ပျူတာဆိုင်စသည့်အခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ရှိ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
・ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ၊ အသုံးပြုသူ၏ စမတ်ဖုန်း၊ Tablet နှင့် ကွန်ပျူတာ စသည့် အခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ရှိ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုနိုင်သည့်အခြေ အနေမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
အပိုဒ် ၆။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အခြား သူများထံသို့ထုတ်ပေးခြင်း။
လက်ရှိကုမ္ပဏီသည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များမှလွဲ၍ အသုံးပြုသူထံမှသဘော တူညီမှုကိုမရယူဘဲ အခြားသူများထံသို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမထုတ် ပေးပါ။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ထိန်းသိမ်း‌ရေးဥပဒေနှင့် အခြား ဥပဒေများခွင့်ပြုထားသည်မှလွဲ၍ )
・လူတစ်ဦး ၏အသက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်း၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ခက်ခဲသောအခါ။
・ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ရန် (သို့) ကလေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ၎င်း၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ခက်ခဲသောအခါ။
・အမျိုးသားအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဥပဒေအရပြဌာန်းထားသည့်အရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရန်တာ၀န်ရှိသူတစ် ဦး အနေနှင့်လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သူ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက် အရအရေးယူမှုများကိုနှောင့်နှေးစေပြီးအန္တရာယ်ရှိသည့်အခါ။
1.	အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် (အခြားသောသူများကိုထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စပါ၀င်ပြီး)
3.	အခြားသူများသို့ပေးအပ်သော နည်းလမ်း။
4.	ကာယကံရှင်၏တောင်းဆိုမှုအရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အခြားသူများထံသို့ပေးအပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ခြင်း
・ရှေ့အပိုဒ်ပြဌာန်းချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက်သတင်း အချက်အလက်ကိုအခြားသူထံသို့သို့ပေးပို့ရန်ကိုက်ညီသည်ဟုယူဆပါသည်။
1.ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏အသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောနယ်ပယ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုမှု အားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စီးပွားရေးမိတ်ဖက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားအပ်နှင်းသောအခါ။
2.ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသောအကြောင်းပြချက်ကြောင် လုပ်ငန်းဆက်ခံမှုအရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ပေးအပ်သောအခါ
3.ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသတ်မှတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်ပူးတွဲ အသုံးပြုသည့်အခါ။
ထိုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏တွဲဖက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများ၊ တွဲဖက်အသုံးပြုသူ၏နယ်ပယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက် အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာ၀န်ရှိသူ၏အမည်သို့မဟုတ်အမည်ကိုထိုသူအားကြိုတင်အကြောင်းကြားသောအခါ။
အပိုဒ် ၇။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များထုတ်ဖော် ပြသခြင်း။
・လက်ရှိကုမ္ပဏီသည် မူအရ ကာယကံရှင်မှလွဲ၍ ကိုယ်‌ရေးကိုယ်အချက်အလက်များ ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းများမရှိပါ။ သို့သော်လည်း အောက်ပါကိစ္စရပ်များ အတွက် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းများရှိပါသည်။
1.ကာယကံရှင်သို့မဟုတ် အခြားသူ၏အသက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများဆုံးရှုံး ထိခိုက် ခြင်းများရှိနိုင်သည့်အခါ။
2. လက်ရှိကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ မှန်ကုန်မှုကိုဖော်ဆောင်ရာတွင် အတားအဆီး ဖြစ်နေသောအခါ။
3. အခြားသောဥပဒေများပတ်သက်၍ ထုတ်ဖော်ပြသရန် လိုအပ်လာသည့်အခါ။
・ရှေ့အပိုဒ်ပါပြဌာန်းချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာသတင်းအချက်အလက်များကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ မှလွဲ၍ အခြားအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အပိုဒ် ၈။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြင်ဆင် ခြင်းနှင့် ဖျက်ခြင်း။
・အသုံးပြုသူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာချက်အလက်များမမှန်ကန်ပါကအသုံးပြုသူသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ခြင်း (အောက်တွင်“ ပြင်ဆင်ခြင်း” အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
・အထက်ပါစာပိုဒ်မှအသုံးပြုသူထံမှတောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိပြီးတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်သည့်အခါကုမ္ပဏီမှ သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက် အလက်များအားချက်ချင်းပြင်ပေးပါမည်။
・လက်ရှိကုမ္ပဏီသည်ယခင်စာပိုဒ်ပါပြဌာန်းချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပါကသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပါကအသုံးပြုသူအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
အပိုဒ် ၉။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအသုံးပြုရေး ဆိုင်းငံ့ခြင်း။
・ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာချက်အလက်များကိုအသုံးပြုမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ လူပုဂ္ဂိုလ်ကကိုင်တွယ်သောကြောင့်သို့မဟုတ်၎င်းသည်မသင့်လျော်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ရယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ခြင်းတောင်းဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုချက်ချင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
・ရှေ့အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောစစ်တမ်းရလဒ်အပေါ် အခြေခံ၍ တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်နာ ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းကို ဆိုင်းငံပါမည်။
・အထက်ပါစာပိုဒ်ပါပြဌာန်းချက်များကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားပါက သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်အသုံးပြုသူအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
အပိုဒ် ၁၀။ အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍။
အပိုဒ် ၁၁။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းရေး မှု ၀ါဒပြောင်းလဲခြင်း။
・ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဖော်ပြခြင်းမရှိပါကပြောင်းလဲထားသောမူဝါဒသည်ဤ၀ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်တင်ထားသော အချိန်မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်ရှိသည်။
အပိုဒ် ၁၂။ စျေး၀ယ်အင်တာနက်၀ဘ်ဆိုဒ်။
ဤ၀န်ဆောင်မှုရှိစျေး၀ယ်၀က်ဘ်ဆိုဒ်သည်အခြားသူများမှဖြန့်ဝေသောကြော်ငြာ န်ဆောင်မှု များ (ချိတ်ဆက်မှုများရှိပါက) အားဖြင့်ရည်ညွှန်းအခကြေးငွေရရှိရန်နည်းလမ်းများ ထောက်ပံ့ ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ထောင်ထားသောတွဲဖက်ကြော်ငြာအစီအစဉ်တစ်ခုတွင်ပါ၀င်သူဖြစ်သည်။
အပိုဒ် ၁၃။ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သော နေရာ။
ဤမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုပါကအောက်ပါလိပ်စာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
လိပ်စာ: 16th floor, Ote Center Building, 1-1-3 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
ကုမ္ပဏီအမည်: ONODERA LIFE SUPPORT ကုမ္ပဏီလီမိတက်